ကစားသမားဟောင်းတွေ လူစုံတက်စုံ မြင်တွေ့ရဖို့ရှိနေတဲ့ အာစင်ဝင်းဂါး နှုတ်ဆက်ပွဲ
အာစင်ဝင်ဂါး နှုတ်ဆက်ပွဲအတွက် အသင်းဂန္ထဝင်တွေကို ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်အသင်း
1 May 2018 . 8:24 AM
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ရာသီကုန်မှာ အသင်းကထွက်ခွာတော့မယ့် သက်တော်ရှည် နည်းပြကြီး အာစင်ဝင်းဂါး Arsene Wenger အတွက် ပြုလုပ်မယ့် နှုတ်ဆက်ပွဲကို တက်ရောက်ဖို့ အသင်းရဲ့ ဂန္ထဝင်ကစားသမားတွေကို ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ အာဆင်နယ်ဟာ လာမယ့် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ဘန်လေအသင်းကို Emirates ကွင်းမှာ လက်ခံကစားသွားရမှာဖြစ်သလို ဒီပွဲစဉ်ဟာ နည်းပြ အာစင်ဝင်းဂါး Arsene Wenger ရဲ့ အိမ်ကွင်းနောက်ဆုံးပွဲစဉ် ဖြစ်တာကြောင့် ဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်ပွဲကို အသင်းက ပြုလုပ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းကို (၂၂)နှစ်ကြာ နည်းပြခဲ့ပြီး အအောင်မြင်ဆုံးနည်းပြအဖြစ်လည်း မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ အာစင်ဝင်းဂါး Arsene Wenger ရဲ့ နှုတ်ဆက်ပွဲကို တက်ရောက်ဖို့ အသင်းဂန္ထဝင်ကစားသမားတွေအပါအဝင်၊ ပွဲပေါင်း (၁၀၀)နဲ့ အထက် ကစားခဲ့တဲ့ ကစားသမားဟောင်းတွေ အားလုံးကို အာဆင်နယ်အသင်းက ဖိတ်ကြားခဲ့တာပါ။ အသက် (၆၈)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အာဆင်ဝင်းဂါး Arsene Wenger ရဲ့ နှုတ်ဆက်ပွဲကို အသင်းရဲ့ ဖိတ်ကြားခံထားရသူ အတော်များများ တက်ရောက် ဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်ဖွယ် ရှိနေပါတယ်။
Gunners have written to members of their 100 Club to invite them to the game
Lauren, Robert Pires, Gilles Grimandi, John Lukic, David O’Leary, David Price, Graham Rix, Brian Talbot, Andy Linighan, Martin Hayes, Sammy Nelson, Sol Campbell, Jimmy Rimmer, Liam Brady, David Hillier, Alan Smith, Tony Woodcock, Paul Davis, John Radford, Michael Thomas, John Hollins, Nigel Winterburn, Perry Groves, Jimmy Magill, Jon Sammels, David Court, Bob Wilson, Frank McLintock, Alan Skirton, Billy McCullough, Terry Neill, Thierry Henry, Tony Adams . . .
အာစင်ဝင္ဂါး နှုတ္ဆက္ပြဲအတြက် အသင်းဂန္ထဝင်တြေကို ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ အာဆင္နယ်အသင်း
အာဆင္နယ်အသင်းဟာ ရာသီကုန္မွာ အသင်းကထြက္ခြာတော့မယ့် သက်တော်ရွည် နည်ျးပကြီး အာစင်ဝင်းဂါး Arsene Wenger အတြက်ျပုလုပ္မယ့် နှုတ္ဆက္ပြဲကို တက်ရောက္ဖို့ အသင်းရဲ့ ဂန္ထဝင္ကစားသမားတြေကို ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ အာဆင္နယ်ဟာ လာမယ့် တနင်္ဂေနြေန့မွာ ဘန်လေအသင်းကို Emirates ကြင်းမွာ လက္ခံကစားသြားရမျွာဖစ်သလို ဒီပဲစြဉ်ဟာ နည်ျးပ အာစင်ဝင်းဂါး Arsene Wenger ရဲ့ အိမ္ကြင်းနောက္ဆုံးပြဲစဉ်ျဖစ္တာကြောင့် ဂုဏ်ျပုနှုတ္ဆက္ပြဲကို အသင်းကျပုလုပ်ပေးသြားမျွာဖစ္ပါတယ်။ အသင်းကို (၂၂)နွစ်ကြာ နည်ျးပခဲ့ပြီး အေအာင်ျမင္ဆုံးနည်ျးပအျဖစ္လည်း မွတ္တမ်းဝင္ခဲ့တဲ့ အာစင်ဝင်းဂါး Arsene Wenger ရဲ့ နှုတ္ဆက္ပြဲကို တက်ရောက္ဖို့ အသင်းဂန္ထဝင္ကစားသမားတြေအပါအဝင်၊ ပြဲပေါင်း (၁၀၀)နဲ့ အထက် ကစားခဲ့တဲ့ ကစားသမားဟောင်းတြေ အားလုံးကို အာဆင္နယ်အသင်းက ဖိတ်ကြားခဲ့တာပါ။ အသက် (၆၈)နွစ်အရြယ်ရွိပျြီဖစ္တဲ့ အာဆင်ဝင်းဂါး Arsene Wenger ရဲ့ နှုတ္ဆက္ပြဲကို အသင်းရဲ့ ဖိတ်ကြားခံထားရသူ အေတ္မာ်ားမ်ား တက်ရောက် ဂုဏ်ျပုနှုတ္ဆက္ဖြယ် ရွိနေပါတယ်။